Keydka dabiiciga Björnnäsets | Booqo Hultsfred
Bogga hore » Eeg & samee » Soojiidashada dalxiiska » Dabiiciga keydka » Keydka dabiiciga ee Björnnäset
Waa keyn sixir dhab ah oo leh geedo duug ah oo hareeraha ka taagan dhagxaan dhagxaanta lagu daboolay. Keydka dabiiciyan ee Björnnäset wuxuu ku yaalaa magaalo madaxeedka Åkebosjön. Kaydka wuxuu ku yaalaa deegaanka Stora Hammarsjön dabeecadiisa iyo deegaanka lagu ilaaliyo kaluumeysiga oo ka baxsan Hultsfred. Halkan, geedaha waxaa loo oggolaaday inay nabad ugu koraan keymaha casriga ah. Waxaad dooran kartaa inaad ku lugeyso masaafo dhan 2 ama 3,5 kiilomitir, labadaba dhulka buuraleyda ah.
Da'da kaynta waa inta udhaxeysa 100 ilaa 150 sano. Aagga waxaa ku yaal capercaillie iyo grouse madow. Aagga waxaa sidoo kale booqday dhowr ka mid ah alwaaxyadayada, oo ay ku jiraan tukeynta qashinka waaweyn ee madow.
2021-07-02T13:36:05+02:00Dabiiciga keydka, Shimbir daawashada|
Dhammaan keydadka dabiiciga